ဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်ကြမယ် – MrDBA Blog
Posted in ကြော်ငြာ - July 17, 2010 -4Comments
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပမြဲဖြစ်သော ဗုဒ္ဓဂယာ သုခါရမကျောင်း၏ ပဥ္စမအကြိမ်မြောက် ဝါဆိုသင်္ကန်း စုပေါင်းဆက်ကပ်လှုဒါန်းပွဲကို ယခုနှစ်တွင်တော့ ၁၃၇၂ ခု၊ ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း (၇)ရက်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၈) ရက်နေ့၊ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ စင်ကာပူနိုင်ငံ Informatic Campus (10 & 12 Science Centre Road, Singapore 609080. Near Jurong East MRT) တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုနှစ်တွင်လည်း ယခင်နှစ်များနည်းတူ တကာ တကာမများဆီသို့ ဂေါပကအဖွဲမှ အီးမေးများမှတဆင့် အလှုသို့ကြွရောက်ချီးမြင့်နိုင်ရန် တတ်အားသမျှ ဖိတ်မန်တကပြုထားပါတယ်။ ဖိတ်စာမရခဲ့လျှင်လည်း ယခုဖတ်မိသည်နှင့် ကြွရောက်ချီးမြင့်နိုင်ပါတယ်။
အစီအစဉ်အနေနှင့် နံနက် ၁၀ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ အနုမောဒနာတရား နာကြားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ ၁၁ နာရီမှ ၁၂ နာရီအထိ နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှုဒါန်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဧည့်ပရိသတ်များကိုတော့ နေ့လည် ၁၁ နာရီမှ ၁း၃၀ အထိ နေ့လည်စာဖြင့် တည်ခင်းကျွေးမွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသို့ ဧည့်ခံကျွေးမွေးခြင်း အစီအစဉ်များအပြင် စေတနာရှင်များမှလဲ စတုဒီသာ မုန့်များဖြင့် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လာကြသူများကို ဧည့်ခံကျွေးမွေးဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတူ မည်သူမဆို စေတနာတတ်အားသလောက် စတုဒီသာ မုန့်များ ကျွေးမွေးလှုဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်။
Tags : ဝါဆိုသင်္ကန်း
Ornagai iPhone/iPod Touch Dictionary App Give Away!!